တစ်ဦးကမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့အဆိုပြုပုံစံကြာသောခြွင်းချက်ကြေညာချက်ဖြစ်ပါသည်: P ကိုပြီးရင်ဆိုးကျိုးဥပမာများပါဝင်သည်မယ်ဆိုရင်:
အားလုံးသုံးထုတ်ပြန်ချက်များခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးအပိုင်း ( ... အကယ်. ) တံဆိပ်ကပ်သည် antecedent နှင့်ဒုတိယအပိုင်း (ထို့နောက် ... ) အကျိုးဆက်များတံဆိပ်ကပ်နေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်ရှိရေးဆွဲနိုင်သည့်နှစ်ခုကိုတရားဝင်အခြနှင့်ရေးဆွဲနိုင်သည့်နှစ်ခုမမှန်ကန်တဲ့အခြများမှာ - ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့အဆိုပြုအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဆက်ဆံရေးမှန်ကြောင်းယူဆတဲ့အခါမှသာ။
: P မေး ထို့နောက် P ကိုမေးလျှင်
T က T က T က
T က F ကို F ကို
F ကို T က T က
F ကို F ကို T က
ပထမဦးဆုံးတရားဝင်အခြသည့်ခိုင်လုံသောအောင်ကပါဝငျသော antecedent အပြုသဘောဟုခေါ်သည် အငြင်းအခုံ ဟာ antecedent စစ်မှန်တဲ့သောကွောငျ့, ထို့နောက်နောက်ဆက်တွဲလည်းမှန်ကြောင်း။ ထို့ကြောင့်: ကသူမ၏အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်မှန်သောကွောငျ့, အဲဒီနောက်သူမချမ်းအေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေကြောင့်လည်းမှန်သည်။ ဒီအတှကျလကျတငျအသုံးအနှုန်း, modus ponens မကြာခဏအသုံးပြုသည်။
ဒုတိယခိုင်လုံသောအခြအကျိုးဆက်များမှားယွင်းသောသောကွောငျ့, ထို့နောက် antecedent လည်းမှားယွင်းသောကြောင်းခိုင်လုံသောအငြင်းအခုံအောင်ကပါဝငျသောနောက်ဆက်တွဲ, ငြင်းပယ်ဟုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့်: သူမထို့ကြောင့်သူမ၏အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပါဘူး, အအေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတှကျလကျတငျအသုံးအနှုန်း, modus tollens မကြာခဏအသုံးပြုသည်။
ပထမဦးဆုံးအမမှန်ကန်တဲ့အခြအကျိုးဆက်များစစ်မှန်တဲ့သောကွောငျ့, ထို့နောက် antecedent လည်းစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ရမည်သောမမှန်ကန်တဲ့အငြင်းအခုံအောင်ကပါဝငျသောနောက်ဆက်တွဲအပြုသဘောဟုခေါ်သည်။
ထို့ကြောင့်: သူမထို့ကြောင့်သူမ၏အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ကြရမည်ဖြစ်သည်, အအေးမဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်တစ်ခါတစ်ရံနောက်ဆက်တွဲ၏ဟာမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
ဒုတိယမမှန်ကန်တဲ့အခြထို့နောက်ထို့ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲလည်းမှားယွင်းသောသူဖြစ်ရမည်, အ antecedent မှားယွင်းသောဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်မမှန်ကန်တဲ့အငြင်းအခုံအောင်ကပါဝငျသော antecedent, ငြင်းပယ်ဟုခေါ်သည်။
ထို့ကြောင့်: သူမထို့ကြောင့်သူမချမ်းအေးဖြစ်ရပါမည်, သူမ၏အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပါဘူး။ ဤသည်တစ်ခါတစ်ရံ antecedent ၏ဟာမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းနှင့်အောက်ပါပုံစံဖြစ်ပါတယ်:
ထို့ကွောငျ့, P ကို ​​အကယ်. မေး
ရော်ဂျာဟာဒီမိုကရက်ပါတီသည်ဆိုပါက, ထို့နောက်သူကလစ်ဘရယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရော်ဂျာထိုကြောင့်လစ်ဘရယ်မဖြစ်ရ, တစ်ဦးဒီမိုကရက်ပါတီမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတရားဝင်မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်သောကွောငျ့, ဒီဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူတိကျမ်းစာ၌လာသည်ဘာမှနေပါစေသင်နှင့်အတူ P နှင့် Q ကိုအစားထိုးအသုံးပြုနိုင်သည်အဘယ်အရာကိုအသုံးအနှုန်းများ, မှားယွင်းတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်အထက်ပါနှစ်ခုမမှန်ကန်တဲ့အခြဖြစ်ပေါ်နားလည်ခြင်းအကြားခြားနားချက်ကိုနားလည်သဖြင့်ကူညီခဲ့နိုင်ပါတယ် လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောအခြေအနေများ ။ သငျသညျကိုလညျးဖတျရှုနိုငျ အခြ၏စည်းမျဉ်းများ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
alternate spelling: none
လောကအကြမ်းဖက်မှု vs. ဘာသာရေး
ကက်သလစ်အသင်းတော်၌ Excommunication ဆိုတာဘာလဲ
အကောင်းဆုံးလို, Barneys လို Stinson Quotes
စပိန်တွင် 'အိုအားလုံးရဲသစ္စာလာကြ' '
Aeschylus အားဖြင့် Thebes ဆန့်ကျင်ခုနစ်၏ကြံစည်မှုအကျဉ်းချုပ်
Gouldian Finch: Fine, အမွေး Cheaters
အဆိုပါ Mauryan အင်ပါယာအိန္ဒိယအများစုဟာအုပ်ချုပ်ဖို့ပထမမင်းဆက်ခဲ့
အနုပညာ Nouveau ဗိသုကာပညာနှင့်ဒီဇိုင်း
ဂေါက်ညွှန်ကြားချက်ဗီဒီယိုများ: ဤအခမဲ့ဂေါက်သီးသင်ခန်းစာများ Watch
ပြင်သစ်တွင် (ကိုအမိအရဆုပ်ကိုင်ဖို့) "Saisir" Conjugate ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
ကျွမ်းဘားသူ Alicia Sacramone Quinn အကြောင်းသိထားမှ 8 အရာ
သင်ကပြန်လှည့်ကျောင်း Going နေတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါရန် 13 ကြီးထွားလာ Industries,
လွတ်လပ်ရေးပြန်လည်ရုတ်သိမ်းမှုဂျွန် Cleese ရဲ့သတိပြုပါ
ဘုံလျှောက်လွှာက Short ဖြေသိကောင်းစရာများ